iCloud, Photos ary serivisy hafa ao amin'ny Apple cloud dia manana olana miasa | Avy amin'ny mac aho
iCloud, Photos, ary serivisy rahona Apple hafa dia misy tsy fahombiazana
Nandritra ny ora vitsivitsy, ny sasany amin'ireo serivisy rahona Apple, toy ny iCloud sy Photos, misedra malfunctions, manao izany tsy mety na miadana kokoa noho ny mahazatra izy ireo.
Rehefa miditra amin'ny tranokalan'ny fanjakan'ny rafitra Apple, amin'ny fotoana namoahana ity lahatsoratra ity, dia hitantsika ny fomba Ny backup iCloud, ny tsoratadidy ary ny fandrindrana tabilao, Sary, iCloud Drive, ary iCloud Keychain Izy ireo dia aseho / aseho ny olana amin'ny fampandehanana ny mpampiasa sasany, miasa miadana izy ireo na tsy misy mivantana.
Ny olana voalohany amin'ny asa dia misy fiantraikany amin'ny mpizara Apple hatramin'izay 8 ora lasa izay, indrindra manomboka amin'ny 11:54 maraina (fotoana espaniola) rehefa hita ny olan'ny fiasana voalohany.
Apple dia tsy nanome antsipiriany bebe kokoa momba ity fahatapahana ity. Amin'ny alàlan'ny tranokalany momba ny satan'ny rafitra dia mampiseho ny fotoana nahitana azy ireo ihany.
Raha sendra olana amin'ny fampisehoana amin'ireo serivisy Apple ireo ianao, ny zavatra tsara indrindra azonao atao raha miankina amin'izany ny asanao. tsidiho tsy tapaka ny tranokalan'ny serivisy Apple amin'ny alàlan'ity rohy.
Apple dia manana mpizara miparitaka eran'izao tontolo izao, noho izany dia mety tsy hisy fiantraikany mitovy amin'ny mpampiasa rehetra ny fianjeran'ny mpizaranao.
Indrisy anefa, Apple dia tafiditra ao amin'ny tranonkala iray ihany ny satan'ny rafitrao rehetra maneran-tany ary tsy amin'ny kaontinanta toy ny ataon'ny orinasa hafa.
Amin'izany fomba izany dia azo inoana fa raha tsy manana olana amin'ny serivisy sasany ianao amin'izao fotoana izao, mety hijaly ianao ao anatin'ny ora vitsivitsy manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » iCloud, Photos, ary serivisy rahona Apple hafa dia misy tsy fahombiazana
Gurman dia tsy manana fanantenana momba ny sensor mari-pana ho an'ny Apple Watch Series 8
Tsara ny mametraka ny fanavaozana farany ho an'ny macOS Big Sur sy Monterey